नेकपा र कांग्रेसको आ–आफ्नै ह्वीप, राजधानी दाङ हुन्छ त ? « Ok Janata Newsportal
नेकपा र कांग्रेसको आ–आफ्नै ह्वीप, राजधानी दाङ हुन्छ त ?
काठमाडौं । प्रदेश नम्बर ५ को राजधानी दाङको देउखुरी बनाउने प्रस्तावमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद सिर्जना भएको छ । यद्यपि राजधानीको विषयमा दुवै दलका नेता र अन्य दलका सांसदहरुले आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा मतदान गर्ने तयारी गरेका छन् ।
नेकपाले प्रदेश ५ को राजधानी दाङको देउखुरी बनाउने पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदलाई ह्वीप जारी गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसले दाङको विपक्ष मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले संसदमा पेश गरेको प्रस्तावका विपक्षमा मतदान गर्ने पार्टीले निर्णय गरेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले बताए ।
मंगलबार (आज) बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा राजधानी र नामबारे मतदान प्रक्रियाबाट निर्णय हुने कार्यसूचि छ ।
प्रदेशसभामा सरकारले स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ क्षेत्र र प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ ।
उक्त प्रस्तावमाथि प्रतिपक्षी दलहरुको विरोधका बीच सोमबार छलफल भएको र सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले दिइसकेका छन् ।
सोमबारको बैठकमा मन्त्री केसीले जवाफ दिने क्रममा कांग्रेसका सांसदहरुले होहल्ला गर्दै कुर्सी तोडफोड गरेका थिए । कुर्सी तोडफोड गर्ने आफ्ना सांसदहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनी कांग्रेसले दिएको छ ।